Dalladda SONSAF ayaa tababarro kor loogu qaadayo aqoonta ay dumarku u leeyihiin dhinacyada hoggaaminta iyo siyaasadda u qabatay garabyada dumarka ee xisbiyada Qaranka. – SONSAF
Dalladda SONSAF ayaa tababarro kor loogu qaadayo aqoonta ay dumarku u leeyihiin dhinacyada hoggaaminta iyo siyaasadda u qabatay garabyada dumarka ee xisbiyada Qaranka.
Ugu horrayn furitaankii kulanka waxa hadal dheer ka soo jeediyay guddoomiyaha dalladda SONSAF Anwar Cabdiraxmaan Warsame, isaga oo ku dheeraaday sida ay dalladda SONSAF uga go’antahay inay mar walba barbar taagnaato haweenka leh hanka siyaasadeed ee doonaya inay ka qayb qaataan talada dalka. Guddoomiyuhu waxa kale oo uu carrabka ku dhuftay taageeradii ballaadhnayd ee SONSAF u fidisay dumarkii qaybta ka ahaa doorashooyinkii isku sidkanaa ee dalka ka dhacay ee u sharraxnaa golaha Baarlamaanka iyo golayaasha deegaannada ee dalka. Guddoomiye Anwar sidoo kale ku boorriayay dumarka inay ka faa’idaystaan muddada tababarku socdo isaga oo tilmaamay in aanu aqoon is weydaarsigani noqonayn kii u danbeeyay balse marar kale ay dumarka kala shaqayn doonaan baahiyahahooda dhanka siyaasadda
Tababarrada oo ka socday magaalada Hargeysa, ayaa waxa ka soo qayb galay dumar ka kala socday garabyada haweenka ee xisbiyada qaranka min heer qaran illaa heer degmo, waxaana muddadii uu socday lagu barayay Tabaha hoggaaminta toolmoon iyo aqoonta iyo astaamaha lagu garto qofka hoggaamiye bulsheed ama siyaasadeed ah iyada oo xisbi walba maalin loo qabtay si loo ogaado looguna kuur galo meelaha xisbi walba ku fiican yahay iyo meelaha uu ku liito.
Tababarkan oo ay bixinayeen khubaro dhanka hoggaaminta iyo siyaasadda ayaa gabagabadii dumarkii ka socday xisbiyada Qaranka ee ka qayb galay waxay u mahadnaqeen dalladda SONSAF sida ay marwalba u barbar taagan tahay una kaalmayso dumarka ku jira siyaasadda ee doonaya inay mar uun hoggaanka u qabtaan talada dalka.